၀က်ဖို့ဒ်ကို ၅-၀ နဲ့ နိုင်ထားခဲ့တာတောင်မှ ပွဲအပြီးမှာ သူ့ကို ဆာလား ဘာလာမေးခဲ့သလဲဆိုတာ ထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့ ဖော်စတာ - xyznews.co
ယခုလ အစောပိုင်းက လီဗာပူးတို့ ဝက်ဖို့ဒ်ကို ၅-၀ နဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ် အပြီးမှာ မိုဟာမက်ဆာလားရဲ့ လိမ္မာပါးနပ်ပြီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျလွန်းတဲ့ မေးခွန်းအတွက် ဘန်ဖော်စတာဟာ အီဂျစ်စတားကို အထူး ချီးကျူးသွားခဲ့ပါတယ်။ ယာဂန်ကလော့ရဲ့ အသင်းဟာ Vicarage Road မှာ အိမ်ရှင် ဝက်ဖို့ဒ် အသင်းကို ဆာလား မာနေး ဖာမီနို (ဟက်ထရစ်) တို့ရဲ့ သွင်းဂိုးတွေနဲ့ အတူ သက်တောင့်သက်သာ အနိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ ပွဲစဉ်အပြီးမှာ ဆာလားဟာ ဝက်ဖို့ဒ် ဂိုးသမား ဖော်စတာ ဆီကို ချည်းကပ်ပြီး အကယ်၍ ပွဲကစားချိန်အတွင်း လီဗာပူးတို့ ပင်နယ်တီ ရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘယ်ဘက်ကို dive ပစ်သွားမလဲ ဆိုတာကို မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ ဝက်ဖို့ဒ် ဂိုးသမားက ဆာလားရဲ့ ယခုလို မေးခွန်းကို ကြည့်လိုက်ခြင်း အားဖြင့် လီဗာပူး တိုက်စစ်မှုးဟာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ကစားသမား ဖြစ်လာရန် သူ့ကိုယ်သူ ဘယ်လောက် မောင်းနေသလဲ ဆိုတာ သိရှိနိုင်တယ်လို့ ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဖော်စတာက ‘Oh my gosh! လီဗာပူးဟာ ကောင်းစွာ လေ့ကျင့်ထားတဲ့ အရမ်းကောင်းတဲ့ အသင်းတစ်သင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသင်းဟာ ကျွန်တော့် ကစားသမား ဘ၀ တစ်လျှောက် ရင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ အကောင်းဆုံး အသင်းတွေထဲမှာ ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် အထူး ပြောသွားချင်တဲ့ အရာ ကတော့ မိုဆာလားရဲ့ အကြောင်း ပါပဲ။ ပွဲအပြီးမှာ သူ ကျွန်တော့်ကို ပြောခဲ့တဲ့ အရာကို စဉ်းစားကြည့်ပြီး ‘Oh my gosh! သူဟာ တကယ့်ကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျလွန်းသူ ၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် တအား မောင်းနှင်သူ ၊ တက်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ချင်တဲ့သူပဲ’ လို့ တွေးခဲ့မိပါတယ်။
သူတို့ဟာ ဒီပွဲကို ၅-၀ နဲ့ နိုင်ထားခဲ့တာပါ။ မိုဆာလားဟာ ဒီပွဲစဉ်မှာ အရမ်းကောင်းတဲ့ ဂိုးကို သွင်းယူခဲ့တယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပွဲအပြီးမှာ သူကျွန်တော့်ဆီကို လာခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ပါးစပ်ကို လက်နဲ့ ကွယ်ထားခဲ့ကာ သူပြောတဲ့ အရာတွေကို ကင်မရာတွေ ဖမ်းမိသွားမှာကို မလိုချင်ခဲ့ပါဘူး။ သူ ကျွန်တော့်ဆီကို လာပြီး ‘ဘန် ဘန်’ လို့ လာခေါ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က ‘အိုကေ? မင်း အဆင်ပြေလား?’ လို့ ပြန်မေးခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက် သူက ‘အကယ်၍ ပွဲအတွင်းမှာ ငါပင်နယ်တီ ရခဲ့မယ်ဆိုရင် မင်းဘယ်ဘက်ကို Dive လုပ်သွားမလဲ?’ လို့ လာမေးခဲ့ပါတယ်။ သူ ဒီလို ပြောပြီးတာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် ဆာလားဟာ တကယ့်ကို တော်တဲ့သူပဲလို့ ကျွန်တော် တွေးခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ဂိုးသမားတွေဟာ ရင်ဆိုင်ရမယ့် တိုက်စစ်မှုးတွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး research လုပ်လေ့ရှိကြပြီး သူတို့ နောက်ဆုံးကန်ခဲ့တဲ့ ပင်နယ်တီ ၅ ကြိမ် ၁၀ ကြိမ်လောက်ကို ဘယ်ဘက် ကန်သွင်းလေ့ ရှိသလဲ ဆိုတာ ရှာဖွေပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် မိုဆာလားဟာ နောက်ဆုံး ပင်နယ်တီ ငါးကြိမ်မှာ ဂိုးသမားရဲ့ ညာဘက်ကို ကန်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော် သူ့ကို ကြည့်ပြီး ‘ငါ ညာဘက်ကို ရွေးချယ်လောက်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မင်းရဲ့ နောက်ဆုံး ပင်နယ်တီ ငါးကြိမ်က ညာဘက်ကိုပဲ ကန်သွင်းခဲ့တာကိုး’ လို့ ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် သူ့ရဲ့ မျက်နှာပေါ်မှာ အပြုံးတွေကို တွေ့ခဲ့ရပြီး သူက ‘Yeah! ကျေးဇူးပါ။ ငါဒါကို သိဖို့ လိုအပ်လို့ပါ။’ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒါကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သူဟာ ၅-၀ နဲ့ နိုင်ခဲ့တဲ့အပြင် မယုံနိုင်စရာ ဂိုးလည်း သွင်းနိုင်ခဲ့ပြီး man of the match ဆု ရခဲ့တာကိုတောင် ရောင့်ရဲကျေနပ်နေတာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ သူဟာ လာမည့် ပွဲစဉ်တွေ အတွက် အသေးစိတ်ကျတဲ့ အချက်အလက်လေးတွေကို သိချင်ခဲ့ပါတယ်။ အကယ်၍ သူ ပင်နယ်တီ ရခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘယ်ဘက်ကို ကန်သွင်းသင့်သလဲ ဆိုတာကို သိချင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း မိုဆာလားဟာ ထိပ်တန်း ကစားသမား တစ်ဦး ဖြစ်နေတာလို့ ထင်ပါတယ်။ သူဟာ တကယ့် ထိပ်တန်းပါပဲ။” လို့ ချီးကျူးလိုက်ပါတယ်။
Previous Article ” သူတို့ အားလုံးက စတားမန်းတွေ ဖြစ်ချင်ကြတာပါ ” ဆိုးလ်ရှားနဲ့ ယူနိုက်တက် ကစားသမားတွေကို ဝေဖန်လိုက်တဲ့ မီကာ ရစ်ချက်
Next Article မာဆေး ဆိုဒ် ဒါဘီ ပွဲစဉ် နောက်ပိုင်း လီဗာပူး ပွဲကို ပထမဆုံး ပြန်လည် ကိုင်တွယ်မယ့် ဒေးဗစ် ကုတ်တီ